Inona no tanjon'ny fiainana? (Tsy Izay no Heverinao) - Blog
Fanamarihana: Raha mametra-panontaniana am-pahatsorana ny amin'ny fiainana sy ny fiainana ianao dia mety ho ketraka. Raha heverinao fa izany no izy dia mifandraisa haingana amin'ny dokoteranao na ny mpitsabo anao. Na mifandray mivantana amin'ny mpitsabo mba hahazoana ny fanampiana ilainao - tsindrio eto raha hahitana iray.
Inona no tanjon'ny fiainana?
Maniry aho fa afaka manome anao valiny tsotra sy mazava momba an'io fanontaniana io, saingy tsy afaka aho.
Ny tsara indrindra azoko atao dia ny milaza izao:
sonia fa tsy ao aminao ny bandy
Ny tanjon'ny fiainana dia ny mitady fomba hanadinoana ilay fanontaniana: 'Inona no tanjon'ny fiainana?'
Ny fiezahana hamantatra ny votoatin'ny fiainana dia dia matetika tsy mahomby.
Mahatsapa fa ny valiny tadiavinao dia tsy tratra mandrakizay.
Ary ny valiny hitanao dia tsy mahafa-po raha tsy hiteny afa-tsy izay.
Na aiza na aiza no itodihanao ary na iza na iza manontanianao dia ny torohevitra fikasana tsara fotsiny no hitanao.
Ary io torohevitra io dia tsy voatery ho torohevitra ratsy (na dia ny sasany aza). Saingy torohevitra izay matetika manao zavatra iray…
Io no manery anao.
Mandresy anao izany.
Mahatonga anao hahatsapa ho toy ny tsy maintsy manao X, Y, na Z izany mba hahitanao ny tena tanjonao amin'ny fiainana.
Ary raha tsy manao izany ianao dia ho faty alahelo sy sorena amin'ny fanananao nenina maro amin'ny fomba niainanao ny fiainanao.
Iza no maniry izany?
Hitanao fa miaina ny teboka iainana.
Tsy mila atao sarotra kokoa noho izany.
Tsy mila hahatratra ambaratonga fahalalana sy fahatakarana.
Tsy mila manenjika tanjona na nofy manokana.
Ny hany mila ataonao dia ny mitady fomba hampijanonana ny fanasongadinana be loatra amin'ny filàna manao zavatra, na olona, ​​na mahatsapa zavatra.
Ka izay torohevitra tsara fikasana izay mikasa handrendrika ny tanjon'ny fiainana ho lasa nuggets tsotra an'ny 'fahendrena' toy ny hoe mifaly, tiavo ny hafa, avelao ny lova, ho 'kinova farany tsara indrindra' amin'ny tenanao…
Tsy dia diso loatra izany, mifantoka amin'ny valiny fotsiny.
Ary mahatratra ny toerana itodiana ny fahazoana vokatra.
Raha tsy tonga amin'izany toerana izany ianao dia mahatsiaro ho tsy tanteraka mandrakizay.
Ary raha manao izany ianao, inona no ho avy?
Betsaka ny vintana mety hitranga aorian'izay dia ny fahatsapana fanahiana sao very ny fihazohanao an'ity vokatra ity ary hitanao fa tsy tonga tany amin'ny nalehanao akory ianao.
Toy ny manandrana milalao tag miaraka amin'ny alokalonao ianao - tsy azonao tratrarina mihitsy na manao ahoana na firy ny firosoanao aminy.
Aleo ianao mihodina, miatrika ny masoandro, ary manadino fa eo ny alokalonao.
Ny masoandro no fiainana. Tokony hitodika sy hiatrika ny fiainana ianao fa tsy hanenjika ny valiny amin'ny fanontaniana tsy voavaly.
Amin'izao fotoana izao, mety mijery olon-kafa ianao ary manontany tena hoe ahoana no ahafahan'izy ireo miverina amin'ny fiainany miverimberina ary toa tsy miraharaha izay alehany…
Ny marina dia, ireo olona mandeha amin'ny fiainany ireo dia tsyvesaran'ny vesatry ny fiainana fiainana misy tanjona.
Miaina fiainana fotsiny izy ireo. Izany no tanjona.
Mety tsy ho faly foana izy ireo. Mety tsy hitondra fiatraikany lehibe eo amin'izao tontolo izao izy ireo. Mety tsy hahomby eo imasonao izany. Mety toa tsy mitombo amin'ny maha-izy azy izy ireo…
Saingy mety ho afa-po kokoa amin'ny toerana misy azy ireo koa izy ireo noho ianao amin'ny toerana misy anao.
Noho izany, azafady, aza mampitovy ny tanjon'ny fiainana amin'ny asa na asa lehibe. Ny kely sy ny lehibe dia tsara amin'ny fombany avy.
Tsy ny rehetra no hahazo harena na laza be.
Tsy ny rehetra no hahatratra ny avo indrindra amin'ny fahazavana ara-panahy.
Tsy ny rehetra no hiaina ny fiainana amin'ny nofinofisiny.
Raha ny tena izy dia tsy fahita firy ny olona mahatratra izany.
Raha izany no izy tena ny lafin'ny fiainana mihitsy, isika dia karazana espaniola tena ketraka.
Rehefa, raha ny tena izy, ny ankamaroan'ny tsy fahafaham-po tsapan'ny olona amin'ny fiainany dia tsy noho ny tsy fahampian'ireo zavatra ireo manokana, fa noho ny finoana fa mitarika fahafaham-po ireo zavatra ireo.
fanontaniana apetraka amin'ny namana vaovao
Ny ambition dia tsy zavatra ratsy hananana amin'ny fiainana na inona na inona fomba rehetra raha mbola tsy mampitovy ilay zavatra tadiavinao hahatongavana amin'ny tanjonao farany amin'ny fiainana ianao.
Araka ny nolazain'ny mpampianatra iray tsara, ny fiainana dia ny mankafy ny dia sy ireo fiakarana marobe eny an-dalana.
Ary mankafy ny dia ianao manatrika fotoana betsaka araka izay azonao atao .
Amin'ny alàlan'ny tsy fivadihana amin'izay lalana halehanao na izay fijanonana hataonao eny an-dalana.
Ankehitriny rehefa nanazava ny antony tsy tokony hitadiavanao ny tanjon'ny fiainana intsony aho, andao hizaha fomba mivaingana sasany hanaovana izany.
Ahoana ny fomba hanadinoana ny momba ny 'tanjona'
Raha nahatratra ity pejy ity ianao, dia manontany tena ianao hoe inona ny dikan'izany rehetra izany.
Ary mety efa nieritreritra an'izany ianao nandritra ny fotoana kelikely.
Raha ny marina, ny maniry ny hahatakatra ny dikan'ny fiainana dia mety ho lasa faniriana diso tafahoatra.
Ka ny maheno fa tokony hieritreritra ny hamarana ny fikatsahanao tanjona ianao dia mety tsy ho mora raisina.
Inona avy ireo zavatra mety hataonao mba hanovana ny sainao hiala amin'ity karazana fisainana ity?
Ny iray amin'ireo olana lehibe manodidina ny fitadiavan'ny olona tanjona sy dikany amin'ny fiainana dia ny fisalasalantsika mandrakizay raha ny amin'izay eritreretintsika hery ento io raha ny marina dia ento aty.
Tapa-kevitra tokoa isika fa hahita ny làlana tsara indrindra mankany amin'ny fiainana kendrena ka manjary mibolisatra amin'ny fanapahan-kevitra raisintsika.
Miezaka izahay mba hampitomboana ny vokatra tsirairay avy, saingy tsy ho fantatray mihitsy raha ny fanapahan-kevitra noraisinay no tena safidy tsara azonay.
Ka tavela eo isika manontany tena hoe 'ahoana raha?'
Ahoana raha nifidy lalana hafa isika? Ho sambatra kokoa ve isika izao ary hanakaiky ny tanjontsika farany?
Nefa misy fomba hafa. Hevitra hafa azonao raisina.
Ny fahafaham-po dia nofaritana ho toy ny olona iray izay manorim-ponenana safidy iray izay ampy tsara nefa tsy voatery ho ilay iray izay mitondra amin'ny vokatra tsara indrindra.
Ireo izay afa-po dia tsy dia mahatsiaro fanenenana, ary mety ho faly kokoa amin'ny fanapahan-kevitra raisiny ( Source ).
Rehefa miatrika fanapahan-kevitra amin'ny fiainana - lehibe na kely - dia andramo ny tsy hikorontan-tsaina azy loatra.
Alao an-tsaina hoe any amin'ny dia lavitra ianao ary tonga amin'ny teboka iray izay mihodina ho roa ny lalana.
Azonao atao ny mijanona ny fiaran-dalamby ary mandany taona manandrana manapa-kevitra raha hiodina amin'ny ankavia na hiodina miankavanana…
… Na azonao ekena fa na ny safidy dia tsy maneho ny faran'ny dia, mifantina iray, ary manohiza mankafy ny fahitana avy eo am-baravarankely.
Tsy ho fantatrao tsara raha ho tsara kokoa ny fomba fijery amin'ny làlana hafa, fa raha mbola mankafy ny fomba fijery anananao ianao, iza no miraharaha?
'Ampy' dia teny mahery rehefa mahatsapa afa-po amin'ny fiainana.
Mbola afaka miasa amin'ny zavatra bebe kokoa ianao, fa raha fantatrao fa ampy izay anananao dieny izao, ny zavatra fanampiny rehetra tsy dia manampy be loatra amin'ny fiainanao, fa omeo fomba fijery hafa momba azy ianao.
Ny tanjonao dia tsy tokony ovao izao tontolo izao amin'ny fomba lehibe rehetra - izay ataonao isan'andro sy isan'andro dia ampy hanovana izao tontolo izao ny fomba.
Rehefa variana mitady ny tena teboka marina amin'ny fiainana isika dia tsy mijery ny harena eo imasontsika.
Ireo harena ireo dia ampy ho an'iza.
Ahoana no hahasambatra sy hianina amin'izay anananao eo amin'ny fiainana
Mahazoa aina amin'ny alahelo
Mafy ny fiainana.
Tsy azo lavina izany.
Na ny adin-tsaina amin'ny asa na ny fisondrotana sy fihenan'ny fifandraisana dia miaina fotoana tsy dia tsara izahay.
Ary rehefa malahelo isika dia manomboka manontany tena raha mety manao zavatra tsy mety isika.
“Misy zavatra tsy ampy ve ato amiko?” mety mieritreritra isika.
Rehefa miatrika ny adim-piainana dia voajanahary ny manandrana mitady vahaolana.
Izay vahaolana, mieritreritra izahay , matetika dia tanjona ambony kokoa amin'ny fianantsika izay tsy hita isika izao.
Fa ny marina dia tsy mahazo aina ny fiainana indraindray.
Tsy handeha foana ny zavatra araka ny antenainao.
Ianao dia ho mahatsiaro diso fanantenana na sahirana amin'ny fisehoan-javatra mihitsy aza.
Na dia azo antoka aza fa mahita vahaolana amin'ny olan'ny fiainana maro ianao, ny hafa tsy azonao.
Indraindray fotsiny ianao dia mila mamono zavatra ary miandry fiainana hiseho. Ary mety maharitra fotoana fohy izany.
Amin'ireto fotoana ireto, rehefa miandry ny fivoaran'ny toe-javatra ianao, dia mety halaim-panahy hikatsaka tanjona lehibe kokoa amin'ny fiainanao ianao.
Mihevitra ianao fa raha afaka manampy tanjona amin'ny fiainanao ianao dia afaka manampy amin'ny famenoana ny lavaka ateraky ny fanaintainana izay tsapanao ankehitriny.
Tohero izany fakampanahy izany.
Na dia tsy mahazo aina aza ny fiainanao izao dia hahatsapa ho salama kely ihany izy amin'ny farany.
Hihatsara tsikelikely ny toe-tsainao. Toa tsy ho maizina ny raharaha.
Fa raha manandrana mitady dikany amin'ny fahorianao ianao dia haharitra ihany izany.
Azonao atao tokoa ny mitady antony haharetana amin'ny fotoan-tsarotra misy anao - zavatra manome anao hery hanohizanao.
Saingy ny fanekena fa hahatsapa ho malahelo ianao indraindray dia mamela anao hisoroka ny fandriky ny fametahana ny fanantenanao rehetra hahitana ny tena tanjonao.
Hadinoy izay ataon'ny hafa na izay eritreretiny
Manontany ny olona hoe inona ny tanjon'ny fiainana noho ny antony maro.
Ny antony iray dia ny fahitany ny ataon'ny olon-kafa ary manontany tena izy ireo raha tokony hanao izany koa izy ireo.
Na mihaino izay lazain'ny olon-kafa momba azy ireo izy ireo ary mandray izany ho porofo fa tsy manao ny tsara ‘marina’ izy ireo.
Ka mba hanadinoana ny fanontaniana momba ny tanjona eo amin'ny fiainana dia tsara ny hametraka ao an-tsainao izay ataon'ny hafa na lazainy.
Sarotra izany eo amin'ny tontolontsika izay mihabe fifandraisana, nefa tsy azo atao.
Ny fanalahidy dia ny fiezahana tsy hahita izay ataon'ny hafa ho fiainana mety ary tsy hanaiky izay lazain'ny hafa ho fahamarinan'ny filazantsara.
Raha maniry ny ain'ny olon-kafa ianao dia apetrakao amin'ny mpandeha an-tongotra sasany. Saingy saika miatrika fanamby maro izy ireo - ny tsy fahasahiranana mitovy aminao.
ahoana no ahalalana fa ampiasaina ianao
Mety ho toy ny hoe manana ny fiainana izy ireo, saingy mampanantena anao aho fa tsy nanao izany.
Mandeha fotsiny izy ireo araka ny tokony hataontsika rehetra.
Raha toa ka tena sambatra tokoa izy ireo dia manontania tena raha tena nahita ny tokan-tena tokana sy lehibe amin'ny fiainana izy ireo sa raha toa ka afaka mandray ny fotoan'ny fiainana sy ny dia alehany izy ireo.
Mampanantena anao aho fa ity no farany.
Ary raha misy tsy miombon-kevitra amin'ny fiainanao - raha izy ireo ataovy ambanin-javatra ny safidy raisinao - apetraho ity ho fomba fijerin'izy ireo fa tsy inona intsony.
Mety misafidy ny hiaina ny fiainany amin'ny fomba hafa izy ireo, saingy tsy tokony horaisinao ho marina izay lazainy.
Raha te hiaina fomba iray ianao dia ataovy izany.
Raha avelanao hanao ny hafa ny hafa ratsy amin'ny fomba fiainanao, ny vokany tsy azo ihodivirana dia ny fikarohana zavatra izay TSARA ...
… Fitadiavana tanjona.
Raha mampatsiahy foana ny tenanao ianao fa tsy misy fomba diso na marina tokony hiainana dia tsy ho voatarika hieritreritra ianao fa diso lalana.
Avelao hitarika anao ny fahaizanao misaina sy ny soatoavinao
“Inona no ilain'ny fiainana?” dia fanontaniana izay avy ao an-tsaina fa mahatsiaro very .
Fikarohana fitarihana izany. Ny faniriana hahatsapa fahatokiana amin'ny zavatra ataonao.
Mahatsapa ianao fa mila mahafantatra ny tanjonao amin'ny fiainana mba hahafahany mampahafantatra ny fizotry ny fanapaha-kevitrao.
Saingy misy loharanom-pahalalana hafa azonao atao - raha vonona hihaino azy ianao.
Ny fahatsapanao tena tsara amin'ny fisafidianana ny làlana izay mahatsapa fa mety. Miorina amin'ny soatoavinao manokana izany.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, amin'ny fihainoana ny tsinainao, dia afaka mihetsika amin'ny fomba mifanentana indrindra amin'ny kompà moraly anatiny ianao.
Ny intuition-nao dia tsy mahalala izay tanjon'ny fiainana, fa tsy miraharaha izany. Fantany fotsiny izay mahatsapa tsara sy mety amin'ny toe-javatra misy rehetra.
Raha avelanao hanao izany, dia hanoro anao ny làlana tsara ho anao amin'izao fotoana izao.
Intuition dia zavatra manokana. Izay mety aminao dia mety tsy hahatsapa ho mety amin'ny olon-kafa.
Ary izany dia porofo misimisy kokoa milaza fa ny fiainana dia tsy manana tanjona tokana na manondro azy.
Ahoana ny fahitana ny fikarohanao tanjona (a.k.a. izay tsy tokony hatao)
Mamelà ahy hizara aminao ny zavatra vitsivitsy mety ho hitanao rehefa mikaroka Internet momba ny tanjon'ny fiainana…
mandinika an'izao tontolo izao / mandehana amin'ny traikefa nahafinaritra
hahatratra ny fahaizanao feno
ho tonga olona mianatra maharitra
miaina fiainana feno
manompoa ny hafa
tiavo ny hafa
mifandray amin'ny tanjona avo kokoa
mamorona fifandraisana tsara
ataovy tsara toerana izao tontolo izao
miaina tsy misy nenina
Lisitra mendrika an'ny zavatra tadiavina amin'ny fiainana , Azoko antoka fa hanaiky ianao.
Fa ny tena tanjonao dia tsy ho hita amin'ireto zavatra ireto.
Araka ny efa nolazaiko teo aloha, tsy fahendrena ny mametraka fepetra amin'ny tanjonao. Tsy tokony hahatsapa ho terena ianao mba ho, hanao na hahatsapa zavatra.
Ny vokatra tsy azo ihodivirana amin'ny fametrahana fepetra amin'ny tanjona dia ny fahatsapanao fa tsy misy tanjona ianao raha tsy afaka mahafeno ireo fepetra ireo.
Ahoana raha tsy afaka ny ho faly amin'ny fotoana rehetra ianao - na amin'ny ankamaroan'ny fotoana aza?
Ahoana raha tsy te hijery an'izao tontolo izao ianao?
Ahoana raha tsy te-hanery ny tenanao hahatratra ny fahaizanao ianao?
Ahoana raha tsy manana lova lehibe avela ianao?
Nahatadidy ny fiainana ve ianao?
Tsy nahomby ve ianao teo amin'ny fiainana?
Azoko antoka fa tsy nanao izany ianao.
Ny tanjon'ny fiainana dia tsy vokatra. Tsy boaty boaty ny manamarika ny endrika iray.
Tsy ho tonga ianao indray andro any ary hiteny hoe: “Aha! Tanteraka ny tanjoko! ”
Azo antoka fa ireo zavatra ao amin'ny lisitra etsy ambony ireo dia mety hitarika fiainana mahafinaritra kokoa, fa ny tsy fisian'izy ireo dia tsy voatery hitarika fiainana tsy dia mahafinaritra.
Raha manandrana ny ho tonga, hanao na hahatsapa zavatra ianao, dia tsy ho tapitra ny fikatsahanao tanjona.
Izay no mahatonga ireo toro-hevitra efatra amin'ny fizarana teo aloha dia ny fanitsiana ny fomba fisainanao fa tsy fanatratrarana tanjona manokana.
Rehefa mikendry ampy ianao, manaiky ny tsy mahazo aina, manadino izay ataon'ny hafa na lazainy, ary henoy ny fisainanao, dia tsy mitady bebe kokoa ianao…
Manaiky ny inona ianao.
hafiriana i jordan beckham
Manamaivana ny fanerena anao ianao handroso mialoha amin'ny vokatra manokana.
Tsy misy ifandraisany ny vokany. Ny fankafizanao ny dia no zava-dehibe.
Rehefa mipetraka ianao ary mankafy ny fahitana avy eo am-baravarankelin'ny fiaran-dalamby rehefa mandalo ny tontolon'ny fiainana dia tsy mahatsiaro terena intsony ianao hamaly ilay fanontaniana “Inona no ilain'ny fiainana?”
ny zazavavy ve tia azy haingana na miadana
maninona ry zalahy no misintona rehefa avy manakaiky
alatsinainy alina alarobia 7 septambra
fanahy antitra ao amin'ny vatana tanora